site ha na 21-03-16
Okwu nonwoven aputaghi “ihe nkpuchi” ma obu “uzo”, mana akwa di otutu karie. Achọghị nke ọma bụ akwa akwa nke ana - ewepụta site na eriri site na ijikọ ma ọ bụ ijikọ ma ọ bụ ha abụọ. O nweghi ihe omuma a haziri ahazi, kama obu ihe sitere na nmekorita nke di na ...
Anyị na-ele anya n’ihu n’iwu
Anyị factory nwere mbụ 6000m2-arụ ọrụ ebe, na 2020 afọ, anyị gbasaa na-arụ ọrụ shop na-agbakwunye 5400m2. Na nnukwu ina nke anyị ngwaahịa, anyị na-atụ anya na-ewu a ibu factory
Equipmentzụta ngwá ọrụ ọhụrụ
site ha na 20-11-02
Anyị factory zụtara 3 ọhụrụ e nke mmepụta ngwá ka afọ ju anyị ugbu a ka ike nke tragaasi akọrọ ekpochapụ. Na na karia ahịa 'zuo chọrọ nke akọrọ-ehichapụ, anyị factory kwadebere ọzọ igwe n'ọdịnihu nke mere na e nweghị igbu oge nke ụzọ oge, na rụchaa ọtụtụ ahịa' ...
site ha na 20-08-05
Anyị nwere Ugboro ahịa otu ọzụzụ ka mma anyị. Ọbụghị naanị nkwukọrịta nke ndị ahịa, kamakwa ọ bụ ọrụ ndị ahịa anyị. Ebumnuche anyị inye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma, nyere ndị ahịa anyị aka idozi nsogbu n'oge nkwukọrịta ajụjụ ha. Ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ omenala ha ...
Ihe dị iche n’etiti Acupuncture Na-abụghị nke a kpara akpa na nke a kpara akpa
site ha na 20-03-16
Acupuncture non-kpara akwa na-abụghị kpara na polyester, polypropylene raw materials Manufactureur, mgbe ọtụtụ acupuncture ga-edozi site na kwesịrị ekwesị-akpọrepu. Dị ka usoro ahụ si dị, jiri ihe dị iche iche, nke ọtụtụ narị ngwaahịa. Acupuncture na-abụghị kpara akwa m ...
Enwere ike iwepụ akwa nhicha ọnụ? Kedu ka enwere ike iji akwa nhicha mkpịsị eji eji?
Mpempe akwụkwọ mpịakọta bụ ngwaahịa ọhụụ nke mepụtara nke na-ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-enyere akwa nhicha ahụ aka inwe ọrụ ọhụụ dịka ekele, onyinye, nnakọta, onyinye, na ahụike na mgbochi ọrịa. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ akwa nhicha ahụ mara mma. Ejiri mpempe akwụkwọ bụ ngwaahịa ọhụrụ. Mpikota ...